Ividiyo: Ngaba ukuthengisa kuyenza imveliso? | Martech Zone
Oku kukufumana okumnandi nokuhlekisayo okuvela kuFrank Dale, CEO we Isihlomelo. Ndiyazi iinkampani ezimbalwa apho ukuthengisa kudlula amava omsebenzisi kunye neenkonzo ezibonelelwa yimveliso. Ngapha koko, ndiyicelile imiboniso engayi kuvula nokusetyenziswa kwayo, endaweni yoko isebenza ngombane oqaqambileyo noqaqambileyo. Ayisiyongxaki leyo xa imveliso yakho ipapashiwe, kodwa ndiyibonile ikrazula ezinye iinkampani xa intengiso iyifoto efotwe ngumfanekiso, ubabalo olugqithisileyo lokudubula kwemveliso.
Ukuthengisa kuseta okulindelweyo, ukuthengisa kuyangqina kwaye kuqokelele ikhomishini, umqondiso womthengi kwaye uyekiswe kwangoko. Ingxaki imane yehle iye ezantsi kulawulo lweakhawunti kunye namaqela eenkonzo zabathengi. La maqela aye ukugcinwa njengenye yezalathi zentsebenzo eziphambili… ke xa iinkampani zishiya okanye zingavuseleli, ulawulo lweakhawunti kunye namaqela eenkonzo zabathengi anoxanduva lokuphendula. Ukuphendula ngento engaphaya kolawulo lwabo.
Ngaba yinto elungileyo ukuyenza? Andiqondi ukuba ukumela into engeyiyo imveliso yakho yinto elungileyo ekufuneka yenziwe. Nangona kunjalo, ezinye zeenkampani ezenzayo zihlala zikhula ngokukhawuleza. Ngokukhula ngokukhawuleza, bayakwazi ukuphumelela isabelo sentengiso, ukuphumelela utyalomali, kunye nokutyala kwakhona ukufumana okudlule Kumfanekiso abawubonisileyo. Xa ezinye zeenkampani zisenza amashumi okanye amakhulu ezigidi zeedola, kunzima kum ukuthi liqhinga elibi. Yinto nje andiyithandi. Andizithandi iinkampani ezenzayo. Kwaye andikuthandi ukucebisa ezo nkampani kubaxhasi bam.
tags: imvelisoUlawulo lwemvelisoukuthengisa imvelisoRC UkukhanyaI-Whitest Kids U'Know
Aug 23, 2011 ngo-7:31 PM
Hahaha, "kutheni umthengi ekhetha isiselo se-incandescent?"
Agasti 24, 2011 kwi-12: 21 AM
Ividiyo emnandi Doug kodwa kufuneka nditsho ukuba iividiyo ezinxulumeneyo ziba mnandi kwaye zingenancasa ngakumbi xa untywila.